‘अहिले तिमीले जस्तो लुगा लगाएकी छौ बिहेपछि लगाउन पाइँदैन...।अहिले जस्तो स्टाइल छ तिम्रो, खान–पान, बोली वचनमा बिहेपछि पुरै चेन्ज हुनुपर्छ।मेरा बुबाआमा, दाजु दिदीको अगाडि मलाई नामबाट बोलाउने र मलाई तिमी भन्न पाइँदैन। हाम्रो आफ्नो कोठामा भन जे पनि सहन्छु तर अरुको सामु आदर गर्नुपर्छ। फलानोले यस्ती श्रीमती भित्र्यो भनेर समाजसामू मेरो बेइज्जत नगर।’
स्नातक सकाएकी साथी बिहेको तयारीमा छिन्। नयाँ वर्षको मौकामा बिहे हुँदैछ। केटो सरकारी जागिरे हो, उनी पनि यसपटक अधिकृतको तयारी गर्ने सुरसारमा छिन्। आफूलाइ पढेर जागिर खाने कत्रो धोको छ, सासु ससुरा कस्ता होलान्? बुहारीले जागिर गर्नुपर्दैन, गाउँमै बस्ने घरको काम गर्ने, काममा सघाउनुपर्छ भने भने.... यत्रो पढेको के काम भयो र? श्रीमान् बाआमाका कुरा सुन्ने खालका भए भने त खत्तमै हुन्छ, बि.ए. पास गरेर भात पकाउने घरधन्दा गर्ने मात्रै त हुने होइन? नन्द आमाजु कस्ता छन्? जेठानी पनि छिन् रे, कस्ती होलिन्? सबै बुहारीमाथि हैकम जमाउने खालका छन् कि? मैले घर गरेर खाने देउरानीले सहरमा बसेर पढ्ने भन्न थालिन् भने के गर्ने होला? सबैका कुरा सुन्ने तर निर्णय आफ्नो विवेकले गर्ने श्रीमान् छन् कि छैनन् होला? अनुहार हेर्दैमा सबै कुरा थाहा नपाइने? बिहेपछिको करियरको सवाललाई लिएर चिन्तित साथी निकै बेचैनीमा छिन्।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस १, २०७४, ०८:५५:४३